MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA: SharingaPostcard of Daw Aung Sun Su Kyi
SharingaPostcard of Daw Aung Sun Su Kyi
ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ဆီက ရရှိတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပို့စ်ကဒ်လေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ရှိပြီးသား၊ သိပြီးသားဆိုရင်လည်း ပြန်ပြောင်း အမှတ်တရပေါ့ဗျာ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တကွ စစ်အဆိုးရ၏ မတရားသဖြင့် ဖမ်းဆီးထားခြင်းခံရသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားအားလုံး အမြန်ဆုံး ပြန်လည် လွတ်မြောက်ကြပါစေ...
Posted by Nyo Gyi at 2.3.08
Labels: DAW AUNG SAN SU KYI, POSTCARD
Heeey Big Brown... Thanks for this post... and your others too.. although I have to do with the English title :)))
now back to business...
In Australia we can purchase custom made stamps...abit costly but an investment for our cause... (1 sheet (20stamps??)will do me) The practice is also run in USA... all we need is the picture that our dear Ko Myoe can design or any of our other graphic experts... as the master has to be toaspecific size.
so how can we share this info with our campaigners? This isavery effective way to promote Burma, well one of the many.
FANTASTIC idea... thanksamillion... I will start at my corner
March 4, 2008 at 6:22 AM
တန်းတူညီတူ မဖြစ်သမျှကာလပတ်လုံး ဒီတိုင်းပြည်ကြီးဟာ လွတ်လပ်တယ်ဆိုပေမယ့် ဟိုလူ့ မြင်တဲ့အခါ မျက်နှာချိုသွေးရ၊ ဒီလူ့မြင်တဲ့အခါ မျက်နှာချိုသွေးရနဲ့ ဖာသယ် လိုနိုင်ငံမျိုးဖြစ်ေ
နမှာပဲဆိုတာ ခင်ဗျားတို့အတိအလင်းနားလည်ထားစေချင်တယ်။ အားမှမရှိသေးတော့ အဲဒီလိုပဲဖြစ်နေမှာပဲ။ အဲဒီတော့က အင်မတန်ကို ကျွန်တော်တို့ တစ်ခါတည်း ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေ စည်းစည်းရုံးရုံးရှိနေပါမှ ဖာသယ်သဘောမျိုး၊ နိုင်ငံမျိုးမဖြစ်စေရမှာ။
အဲဒီတော့ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ညီညွတ်ရေး၊ တိုင်းရင်းသားလူထုညီညွတ်ရေး၊ စားဖားသမားတွေ ညီညွတ်တာ ကျွန်တော်မလိုချင်ပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ညီညွတ်ရေး၊ တိုင်းသူပြည်သား၊ လူထုညီညွတ်ရေး၊ အဲဒီညီညွတ်ရေးနှစ်ခု မရှိသမျှကာလပတ်လုံး ဒီတိုင်းပြည်ဟာ လွတ်လပ်ပင် လွတ်လပ်ငြားသော်လည်း ဘယ်ပါတီတက်တက်၊ ဘယ်အစိုးရလုပ်လုပ်၊ ဖာသယ်တိုင်းပြည် ဖြစ်နေမှာပဲဆိုတာ ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ အဲဒီတော့ကာ ဒီနှစ်ခုကို ခင်ဗျားတို့မပျက်ပြားစေပါနဲ့။ ဘယ်သူကဘာလုပ်လုပ် မပျက်ပါစေနဲ့။ အဲဒါ အင်မတန်အရေးကြီးတယ်။
နမောတဿ ဘဂ၀တော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ
နမော ဗုဒ္ဓါယ သိဒ္ဓမ်
(NAMO BUDDHAYA SIDDHAM)
သစ္စာတရားလေးပါး၊ မြတ်တရားကို၊ ပိုင်းခြားထင်ထင်၊ ကိုယ်တိုင်မြင်၍၊ သုံးပြင်ဘုံသား၊ ဝေနေအားလည်း၊ ဟောကြားမြွက်ဟ၊ မြတ်ဗုဒ္ဓအား၊ ကြည်ဆွသဒ္ဓါ၊ ရှိခိုးပါ၏။
စိတ်မှာ ကြံသလောက်၊ ဓိဋ္ဌာန်ပေါက်၍၊ ကင်းပျောက်အန္တရာယ်၊ ဘေးရန်ကွယ်လျက်၊ သွယ်သွယ်ပြီးမြောက်ပါစေသတည်း။
I worship the Buddha, who has full knowledge of the Doctrine.
May this act of worship prevent all danger and bring about beneficial results !
ဓမ္မာစရိယ B.A. အဂ္ဂမဟာဂန္ထ၀ါစကပဏ္ဍိတ၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ
(From Book of GOLDEN PATHAN)
BLOOD DIAMOND OF BURMA
"ငါးလောင်းပြိုင် လူသတ်မှု နောက်ဆက်တွဲသတင်း (သို့မဟုတ်) စိန်စီသောည မှ အဆက်" -------------------------------------- ယောမင်းလေး ----...
သို့ ... ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ(ငြိမ်း)
"သို့ ... ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ(ငြိမ်း)" နာမည်ကို ငြိမ်းတပ်ပြီး ငြိမ်ပြီး ကြံနေတဲ့ သူ။ မီးခိုးတွေအူနေတဲ့ မြင်ကွင်း သူက ...
ခေါင်းဆောင်ကြီးတို့ သမီးနှစ်ဦး (ရှားပါးသမိုင်းဝင်ဓာတ်ပုံ) ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးဗိသုကာကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သမီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဗမာ...
Actor Yan Aung Said That The Place Away from Men is Military
"ယောက်ျားတွေနဲ့ ဝေးတဲ့နေရာမှာ စစ်တပ်" ဟု ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ရန်အောင် ပြောဆို (နယူးမော်ဒယ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား) ဗမာပြည်ရုပ်ရှင်ရုံမျ...
ဇာတ်လမ်းကတော့ တော်တော်ကြီးကို ကြမ်းမှရလိမ့်မယ်
"ဇာတ်လမ်းကတော့ တော်တော်ကြီးကို ကြမ်းမှရလိမ့်မယ်" ရေးနိုင်သူများခင်ဗျား။ ဇာတ်လမ်းတစ်ခု အကြံပြု တင်ပြချင်လို့ပါ။ ဇာတ်လမ်းက...
လူရွှင်တော် နှုတ်ခမ်းမွှေး ပါပါလေး သံချပ်အဖွဲ့ ခွပ်လိုက်ကြစို့ သူငယ်ချင်း (ဗြောင်ပြော ဒဲ့ပြော) မန္တလေးသင်္ကြန်တွင်းကာလ ၁၁-၁၂-၁၃-၁၄ ရက်များ လှည်...
Photos To Remember Zaganar (ဇာဂနာ အမှတ်တရ၊ ဇာဂနာ ဓာတ်ပုံများ)
ဇာဂနာ အမှတ်တရ၊ ဇာဂနာ ဓာတ်ပုံများ အာဏာရှင်များ၏ မတရားသော အမိန့်အာဏာဖြင့် ထောင်သွင်း အကျဉ်းချခံထားရသော အမျိုးသားလူရွှင်တော်ကြီး ဇာဂနာ၏ ဓာတ်ပ...
ဒေါက်တာကြည်မို့မို့လွင် (သို့မဟုတ်) ဇီးပင်ကြီးသူရဲကောင်း
ဒေါက်တာကြည်မို့မို့လွင် (သို့မဟုတ်) ဇီးပင်ကြီးသူရဲကောင်း ကြီးနှစ်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဝန်ထမ်းများအကြားရေပန်းစားသော ကြီးနှစ်ြ...
Do Thein Sein Forget His Real Father?
အဖေမေ့ပြီး ပထွေးကို ဂါရ၀ပြုတဲ့ သိန်းစိန် ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်အသက်ပေး သွားသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှူးပြုသည့် အာဇာနည်များ၏ အာဇာနည်ဗိမာန်...
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မျက်စိခွဲစိတ်မယ်ဆိုတဲ့ နေပြည်တော်(အရပ်ဘက်)ဆေးရုံကြီးမှာ "ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ ...
MY SIMILAR, OTHER BLOGS
Download Zawgyi Unicode Font (Myanmar Font) to see this blog
Don't Forget The Golden September
Picture from Mizzima
ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်၏ စာအုပ် " ဘာလဲဟဲ့ ... လူ့  ငရဲ "
HanTharWadi U Win Tin: What is the Hell of Living?
A Song Tribute to Burmese Martyrs' Day
Arzarni Day (May Hla Myaing)
to see some items of this blog
"MEDIA to MEDIA" FIGHTING
27th SEA Games in Myanmar
HanTharWadi U Win Tin
INSIDE BURMA NOW-A-DAY
Ludu U Hla
Ludu U Sein Win
Mann Shwe Set Taw
Meik Hti Lar
MY POEMS (English Language)
MYANMAR INDEPENDENCE DAY TOPIC
SEPTEMBER GOLDEN REVOLUTION
Thakhin Kodaw Hmine
YADANARPON MARKET FIRE
Year 150th Mandalay
Zero Color Music Band
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သတင်း၊ ဓာတ်ပုံ၊ အနုပညာနှင့် ဝေဖန်အကြံဥာဏ်များအား ဤအီးမေးလ်လိပ်စာသို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
လွတ်လပ်စွာ ကူးယူ၊ ဖော်ပြ၊ ကိုးကားနိုင်ကြောင်း
မြန်မာပြည်လူ့အခွင့်အရေးရရှိရေး၊ မြန်မာပြည်ကြီး တိုးတက်ကောင်းစားရေးအတွက် အလုပ်လုပ်နေသူများ ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ...
ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်မှ သတင်း၊ ဓာတ်ပုံ၊ ကဗျာ၊ စာစု၊ ကာတွန်း အစသဖြင့်ကို...
လွတ်လပ်စွာ ကူးယူ၊ ဖော်ပြ၊ ကိုးကား နိုင်ပါသည်။
ထိုသို့ကူးယူ၊ ဖော်ပြ၊ ကိုးကားခဲ့ပါက
မူပိုင်စာရေးသူအမည်များကိုတော့ ဖော်ပြပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါသည်။
မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်ဆုံး တိုးတက် စည်ပင် ကောင်းစားပါစေ....
Daw Aung San Suu Kyi & Saya San's Daughter - Daw sein
ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ လူစားကြီး
ကိုသန်းရွှေ ရုပ်ပြောင်ပန်းပု [Artist: Jim McNalis] - ဧရာဝတီ အင်တာနက် မဂ္ဂဇင်း
ပညာကင်းဘိ၊ မနှိုင်းညှိဘဲ၊ ဇာတိပုည၊ မဟတ္တဖြင့်၊ မာနအရာ၊ ကဲမိုးစွာလျက်၊ ငါသာမင်းဟူ၊ ပဇာတူဟု၊ အယူမောက်ကြွား၊ မထောင်လွှားနှင့်၊ တောင်ကားမြင့်ကြီး၊ မီးကားရှိန်ပူ၊ သံမူ မာကျော၊ ဘက်မဲ့သောဟု၊ ရေကြောသတ္တိ၊ မသိ၍သာ၊ ကြိမ်းပရာသို့၊ ပမာပုံမှီး၊ မာန်မူကြီး၍၊ တောင်မီးသံလား၊ မကြုံးဝါးလင့်၊ ရေအားကြုံတွေ့ ၊ ၀ဲဟုန်မွှေ့ ၍၊ တိုက်ဝှေ့ သောခါ၊ မကြာမတင်၊ အလျင်သဖြင့်၊ တောင်မြင့်မီးပူ၊ သံမာမူလည်း၊ မြူသာဖြစ်၍၊ စင်စစ်ကြွေမွ၊ ပျောက်ပျက်ရ၏ ။ (မဃဒေ၀)
A LIGHT OF DHAMMA
TITSAR TAYARDAW MYAR (သစ္စာတရားတော်များ)
BLOGS, I VISITED
မြို့မ အပျော်တမ်း တူရိယာအသင်း
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့ကြီး (A.B.M.A)
ရန်အောင် (ဘလော့ဂ်နည်းပညာ ဖြန့်ဝေသူ)
ပုလဲသွယ် (ဒေါက်တာတင့်ဆွေ၏ နိုင်ငံရေးစာမျက်နှာ)
ခွပ်ဒေါင်းသွေး (FREE FOR COUNTRY)
SHAN HUMAN RIGHT
MY MUCH LOVED WEBSITES
Burmese Web and Blog Directory
FREE BURMA'S POLITICAL PRISONERS NOW! WEBSITE
Grassroots Human Rights Education & Development
Lessons in Democracy
စစ်ကျွန်ဘ၀က လွတ်ဖို့အရေး ဒို့အရေး
မောင်ညိုကြီးကလည်း တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်ပါမည်
To get the Real Freedom from Military Junta, I keep the Promise!
ရှေ့ဆက်၊ ဆက်လက်၊ လက်တွဲ၊ တိုက်ပွဲဝင်ပါမည်